तपाइँलाई रुघाखोकी लागिरहन्छ ? के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय – Online Khabar 24
तपाइँलाई रुघाखोकी लागिरहन्छ ? के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय
मौसममा आजभोलि आइरहेको परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालका समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । भिडियो,
जसका कारण रुघा लाग्ने, ज्वरो आउने लगायतका समस्या सामान्य भएको छ । तर यसबाट बच्नका लागि केही सावधा’नी अपनाएको खण्डमा यस्ता रो’ग लाग्दैन ।
मौसमा आउने परिवर्तनका समयमा इन्फ्लुएन्जाका कीटाणु सक्रिय हुने भएकाले मानिसलाई विभिन्न समस्या देखिन थाल्छन् । सं’क्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, बोल्दा मुखबाट निस्किने कीटाणुयुक्त पानीका कण हावाका माध्यमले वातावरणमा फैलिन्छ र श्वा’सप्रश्वा’सका माध्यमबाट अन्य मानिस सं’क्रमित हुने गर्छन् ।
मौसमी रुघाखो’कीले खासगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भव’ती महिला, दीर्घरोगी र रो’ग प्र’तिरोधा’त्मक क्षमता कम भएका मानिसलाई सताउने गर्छ । त्यसैले मौसम परिवर्तनको समय सकेसम्म बढी भिडभा’ड, हु’लमूल हुने ठाउँमा नजाँदा राम्रो हुन्छ ।
घरमा पनि कुनै सदस्य यस्तो सम’स्याबाट ग्र’सि’त भएको अवस्थामा सा’वधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि बिरा’मीको नजिक नबस्ने, बिरा’मीले प्रयोग गरेका सामग्री प्रयोग नगर्ने आदि ।
घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ । बाहिरबाट घर फर्किएपछि साबुनपानीले राम्रोसँग हातगोडा सफा गरेर मात्र अन्य सामान छुनुपर्छ । यसरी साबुनपानीले राम्रोसँग हात धो’एमा रो’ग लाग्ने सम्भावना ८० प्रतिशत कमी हुन्छ ।
कतिपय रोग अस्वस्थकर जीवनशैली र खानपानका कारण पनि लाग्ने गर्छ । त्यसैले जं’कफुड, पानीपुरी, चट’पटे लगायत खानेकुराको प्रयोग नगर्दा राम्रो । पानी तताएर मात्र पि’उने बानीको विकास गर्नुपर्छ । अस्व’स्थकर पानीका कारण थुप्रै प्रकारका रो’ग लाग्ने गर्छ । रु’घाखो’कीले यसको जो’खिम समू’हकालाई मात्र सताउँदैन ।
कुनै रो’ग नभएका पूर्ण स्वस्थ मानिसलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छ । सामान्य रुघा’खो’कीलाई बेवास्ता गरेर उपचार नगराएमा इन्फ्लु’एन्जा’का कारण ज’टिल समस्या हुन सक्छ । यसकै कारण ज्या’नै जा’न सक्छ । त्यसैले लामो समय ज्व’रो र रु’घा ला’गिरह्यो भने चिकि’त्सक कहाँ पुग्नुपर्छ । योँ खबर साभार गरियको हो ।
Prevविवाहको अर्थ के हो ? के बिहे गर्नु जरुरी छ ? जान्नुस
next‘बर्थ डे’ पार्टीमा विवाद, नृत्यमा हाँसेर गिज्याएको भन्दै किशोरको ह,’त्या